မိတ်ဆုံစားပွဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် အဝါရောင် ပွဲတက်ဝတ်စုံ – FemaleWear.net
မိတ်ဆုံစားပွဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် အဝါရောင် ပွဲတက်ဝတ်စုံ
ခရစ်စမတ်နဲ့ နယူးရီးယား ရှိတဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာ နှစ်ကုန် မိတ်ဆုံစားပွဲတွေ၊ ညပိုင်းဧည့်ခံပွဲတွေ ပျိုမေတို့ တက်ရောက်ရတော့မှာပါ။ ဒီလိုပွဲတွေမှာ လုပ်ငန်းပါတနာတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန် တက်ရောက်ကြမှာမို့ အဝတ်အစားကို ဖြစ်သလို ဝတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ တက်ရောက်ရမယ့်ပွဲနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဝတ်စုံကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပွဲတက်ဝတ်စုံတွေကို ရွေးချယ်ရခက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုချိန်ဘာတွေ ခေတ်စားနေတယ်ဆိုတာကို သိရဖို့ ဆယ်လီတွေရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေကို လေ့လာပေးသင့်ပါတယ်။
Amal Clooney ကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော် မင်းသား George Clooney ရဲ့ ဇနီးပါ။ Amal Clooney ဟာဆိုရင် နာမည်ကျော် ရှေ့နေ တစ်ဦးဖြစ်သလို သံတမန်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ အလှအပကြောင့် သတင်းမီဒီယာတွေ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံရသူ တစ်ဉီးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာတွေမှာ မကြာခဏ ဖော်ပြခံရတဲ့ သူမဟာဆိုရင် ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်ဆင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မေလ (၁၉)နေ့တုန်းက မင်းသားဟယ်ရီနဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့ တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲတို့ Amal Clooney တို့ ဇနီးမောင်နှံ (၂)ဦးစလုံး အတူတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲမှာ Amal Clooney ဟာ အဝါရောင်တောက်တောက် dress ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အဝါရောင်တောက်တောက် ဝတ်စုံရဲ့ တန်ဖိုးဟာ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်း(၂၀)ကျော်လောက် ရှိနေပါတယ်။
Throw Back to the #RoyalWedding! . . . . . #gorgeous #elegant #clooney #amalclooney #georgeclooney #fashion #clooneyfamily
A post shared by Amal Clooney (@amalclooneyofficial) on May 27, 2018 at 11:13pm PDT
? #amalclooney #georgeclooney #clooney #love
A post shared by Amal Clooney (@amalclooneyy) on Dec 17, 2018 at 9:43am PST
ဒီအဝါရောင်ဝတ်စုံလေးဟာ သူမရဲ့အလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေပြီး အားလုံးကလည်း သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအဝါရောင်တောက်တောက် dress လေးဟာဆိုရင် နာမည်ကျော် အင်္ဂလန်ဒီဇိုင်နာ McCartney ရဲ့လက်ရာပါ။ ဒီတော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲရဲ့ အဓိကလူဖြစ်တဲ့ Meghan Markle ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံဟာလည်း McCartney ရဲ့ ဒီဇိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို Meghan Markle နဲ့ Kate Middleton တို့အပြင် နာမည်ကျော် ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးတော်တော်များများလည်း ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ Amal Clooney ရဲ့ အဝါရောင်ဝတ်စုံကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးက အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၁၇၀၀၀ ကျော်က ဒီဝတ်စုံအကြောင်းကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဒီဝတ်စုံကို public မှာရောင်းချနေတာကြောင့် surprise တော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Amal Clooney က ဒီအဝါရောင် ဝတ်စုံကို တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲမှာ ဝတ်ဆင်လိုက်တာကြောင့် ကြော်ငြာသလိုတော့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ခေတ်မီတဲ့ ဝတ်စုံလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
ညစာစားပွဲတွေ၊ ဧည့်ခံပွဲတွေ တက်ရောက်မယ့် ပျိုမေတွေအနေနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ တောက်ပတဲ့ dress တွေကိုသာ ရွေးချယ်ပေးကြဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
Photo Ref: https://www.stellamccartney.com/us/
Tags: Amal Clooney, STELLA MCCARTNEY
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် မော်ဒယ်လ်စျေးကွက်မှာ ကြေးအမြင့်ဆုံး မော်ဒယ်လ်များ
တီရှပ်ခရေဇီတွေအတွက် Ted Baker ရဲ့ Limited edition